उद्योगहरूमा बिजुली अभाव, उद्योगी भन्छन्– पलायन हुने अवस्था आयो :: निर्मला घिमिरे :: Setopati
उद्योगहरूमा बिजुली अभाव, उद्योगी भन्छन्– पलायन हुने अवस्था आयो
नेपालका उद्योगहरूमा दैनिक तीन सय मेगावाट बिजुली अभाव हुन थालेको छ। योसँगै आफूहरू उद्योग सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको उद्योगी/व्यवसायीहरूले गुनासो गर्न थालेका छन्।
गोल्यान समूहका अध्यक्ष पवन गोल्यान बिजुली अभावमा उद्योग चलाउनै मुश्किल परेको बताउँछन्।
'अरू मुलुकमा निर्यातमुखी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न अन्यत्र कटौती गराएर पनि उद्योगलाई बिजुली उपलब्ध गराइन्छ। तर यहाँ त सरकारलाई वास्तै छैन,' उनी भन्छन्, 'नारामा रोजगारी/निर्यात बढाउने भनिन्छ तर व्यवहार दुःख लाग्दो छ।'
आफ्नो एउटा उद्योग बराबर चार हजारभन्दा बढीले रोजगारी पाएको तर लोडसेडिङकै कारण कर्मचारीलगायत समग्र व्यवस्थापन खर्च धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको उनले बताए।
गोल्यानका अनुसार उद्योगले हाल दैनिक २० देखि २२ घन्टा लोडसेडिङको मार खेप्दै आएका छन्।
'यस्तै भयो भने कसरी कर्मचारी पाल्ने? कसरी उद्योग चलाउने? सरकारले निर्यात बढाऊ भनेको छ। हामीले काम गर्न सकेका छैनौं, मेसिन राख्न सकेका छैनौं। भएका पनि चलाउन सकिएन कसरी बढ्छ निर्यात,' उनले प्रश्न गरे।
महँगीका कारण बिजुलीका अन्य विकल्प प्रयोग गरेर उद्योग चलाउन सक्ने अवस्था नरहेको उनले बताए।
'अन्य ऊर्जाले उद्योग चलाउँदा एक दिमा ६० लाखभन्दा बढी खर्च हुन्छ। सिमेन्ट, धागो लगायत सबै उद्योग सबैको अवस्था बिजोग छ,' उनले गुनासो पोखे।
विद्युत प्राधिकरणले बिजुली आपूर्ति सहजीकरण गर्न नजान्दा उद्योगीहरू थप मर्कामा परेको उनको तर्क छ।
'अहिले भारतबाट पावर कम आएको छ। तर यहाँको उत्पादनलाई पनि उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेर बिजुली दिनुपर्नेमा त्यसो गरिएको छैन,' गोल्यानले भने।
उद्योगीका छाता संगठन उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ लगायतले पनि उद्योगीहरूको दुःखमा साथ नदिएको गुनासो उनले गरे।
ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मोहन कटुवाल पनि प्राधिकरणले बिजुली कटौती गरेका कारण ग्रिल तथा स्टिल उद्योगहरू धराशायी अवस्थामा पुगेको बताउँछन्।
'ग्रिल र स्टिल उद्योगका लागि बिजुली माछालाई पानी जस्तै आवश्यक पर्छ। बिजुली बिना कामै गर्न सक्दैनौं,' उनी भन्छन्, 'चुपचाप बस्नुको विकल्प छैन।'
यस्तै भइरह्यो भने धेरै उद्योग पलायन हुने उनी बताउँछन्। बिजुली कटौतीका कारण काठमाडौं उपत्यकाका ग्रिल उद्योगमा थोरै समस्या परे पनि उपत्यका बाहिरका उद्योगमा निकै मर्का परेको उनले बताए।
'सामानको भाउ उस्तै अकासिएको छ। त्यसमाथि काम गर्न बिजुली छैन। अनि उद्योग कसरी चल्नु?,' उनले भने।
विद्युत प्राधिकरणले सुख्खा याममा भारतले बिजुली कटौती गरेकाले नेपाली उद्योगले बिजुली अभाव झेल्नु परेको बताएको छ।
प्राधिकरणका अनुसार सामान्य अवस्थामा नेपालबाट भारतले दैनिक करिब ४०० मेगावाट बिजुली किन्दै आएको थियो। हाल कटौती गरेर दैनिक ८० मेगावाट बिजुली मात्रै उपलब्ध गराइरहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराईले बताए।
'अहिले भारतकै १८ वटा राज्यमा लोडसेडिङ सुरू भइसकेको जानकारी आएको छ। त्यहाँका धेरै उद्योग पनि बन्द भइसके। त्यसैले हामीलाई बिजुली पाउन मुश्किल छ,' उनले भने।
रूस–युक्रेन युद्धपछि भारतमा बिजुली अभाव हुन थालेको हो। योसँगै नेपाली उद्योगमा पनि दैनिक तीन सय मेगावाट बिजुली अभाव भएको प्राधिकरणले बताएको छ।
'हाम्रा उद्योगमा दैनिक पाँच सय मेगावाट बिजुली माग छ। दैनिक करिब दुई सय मेगावाट मात्र दिन सकेका छौं,' भट्टराईले भने।
उद्योगीहरूलाई आवश्यकताअनुसार कसरी बिजुली प्रवाह गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा प्राधिकरणले सोचिरहेको पनि उनले बताए।
'सुख्खा सिजन छ, जताततै पावर संकट छ,' उनी भन्छन्, 'तत्काल लोडसेडिङ कम गर्न सकिने विकल्प छैन। उद्योगलाई आवश्यक बिजुली कहिलेदेखि दिन सक्छौं भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन।'
भारतबाट बिजुली आयात बढाउन सक्ने अवस्था नभए पनि प्राधिकरणले प्रयास गरिरहेको उनले बताए।
प्राधिकरणका अनुसार नेपालले सिजनमा करिब २ हजार २ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्दै आएको छ। माग सरदर १ हजार ३ सय ५० मेगावाट रहेको भट्टराई बताउँछन्। तर सुख्खा सिजनमा उत्पादन आधाभन्दा बढी घट्ने कारण समस्या निम्तिएको उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार हिउँदको समय (कात्तिकदेखि चैतसम्म) दैनिक छ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन्छ। बर्खा याममा शतप्रतिशत उत्पादन भए पनि सुख्खामा कतिपय आयोजनाको उत्पादन मुश्किलले १५ प्रतिशत मात्र हुन्छ। यसकारण बिजुली अभाव हुन्छ।
प्राधिकरणले कुलेखानी, तामाकोशी, कालीगण्डकी, मर्स्याङ्दीजस्ता 'रन अफ द रिभर' आयोजना बढाउन प्रयास गरिरहेको उनी बताउँछन्।
'यस्ता विभिन्न आयोजना अध्ययन क्रममा छन्। कतिपय आयोजना अन्तिम चरणमा पुगेका छन्। दूधकोशी, बुढीगण्डकी लगायत आयोजना अध्ययन भइरहेको छ,' उनले भने।
प्रकाशित मिति: आइतबार, वैशाख १८, २०७९, ०४:०६:००